Mpanohana - Mpanohana ny mpandanjalanja ny fampiroboroboana ny simika: NZ IT Contractors
Fanohanana - mpandraharaha IT
Mpanohana: mpandraharaha IT
Website: Mpandraharaha IT
Na dia niverina tamin'ny zavatra nitovy tamin'ny talohan'ny COVID-19 aza ny fiainantsika manokana tany New Zealand, ara-toekarena, ny làlana mankany amin'ny fanarenana dia mampanantena fanamby mahaliana. Ny fikambanana tsirairay dia samy mandray andraikitra sy mikasa ny hanao ny toe-java-misy amin'ny fomba manokana amin'ny toe-javatra iainan'izy ireo, fa ny fanontaniana hoe ahoana ny fiantraikan'ny krizy amin'ny fandraisana mpiasa dia iray izay manakaiky ny sain'ny birao.
Ny fanontaniana hoe 'Tokony hanakarama mpiasa maharitra ve aho? Tsy zava-baovao ho an'ny mpampiasa izany, fa ao anatin'ny sehatry ny fanapaha-kevitra noraisina an-tsakany sy andavany izay ny fanomezana ny loharanon-karena sahaza amin'ny fotoana mety dia zava-dehibe kokoa, ny fanaovana safidy tsara dia lasa manakiana. Ity ny torolàlana momba ny fanombanana ny tsara sy ny ratsy amin'ny fanakaramana mpiasa maharitra mifanohitra amin'ny mpifanaraka.